ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၆) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on January 28, 2014 at 11:30 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အလုပ်နောက်ကျခြင်း၊ ပျက်ကွက်ခြင်း Late or No Show
ရုံးတစ်ရုံးမှာလုပ်တဲ့အခါ အလုပ်နောက်ကျတာမျိုး၊ အစည်းအဝေးပျက်ကွက်တာမျိုးတစ်ခါတစ်ရံကြုံ ရနိုင်ပါတယ်။ နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါ၊ ယာဉ်ကြောထဲပိတ်မိနေတဲ့အခါမျိုးပေါ့။ ဒါကြောင့် နောက်ကျကြောင်း၊ မလာနိုင်ကြောင်းပြောဆိုနည်းနမူနာဝါကျလေးတွေလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
နည်းနည်းနောက်ကျခြင်း A Little Late
အချို့သောအလုပ်များတွင် အလုပ်ရောက်ချိန်မှတ်သားရန် အချိန်မှတ်စက်ကိုနှိပ်ရတာမျိုးရှိနိုင်သည်။ အလုပ်ဝင်ချိန်နှိပ်ရခြင်းကို punch in ဟုခေါ်ကာ အလုပ်ထွက်ချိန်နှိပ်ခြင်းကို punch out ဟုခေါ်သည်။ ၄င်းသည် နာရီနှင့်တွက်ချက်ပေးချေသည့်အလုပ်မျိုးများတွင် ဤစနစ်ကိုသုံးလေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ punch in မလုပ်ရသည့် လခစားဝန်ထမ်းအလုပ်မျိုးဖြစ်ပါက မိနစ်အနည်းငယ် နောက်ကျခြင်း အတွက်ဆင်ခြေပေးရတော့မည်ဖြစ်သည်။
"Sorry I'm late. Traffic was unusually bad today."
နောက်ကျလို့ ၀မ်းနည်းပါတယ်။ ဒီနေ့ကျမှ လမ်းတွေခါတိုင်းထက်ပိုပိတ်နေလို့။
"I apologize for being late. I had to drop off my wife at work. It took longer than I thought."
နောက်ကျသွားတာတောင်းပန်ပါတယ်။ မိန်းမကိုအလုပ်လိုက်ပို့ပေးရလို့။ ထင်ထားတာထက်ပိုကြာသွားတယ်။
* drop off = ဆင်းရန်ကားရပ်ပေးသည်။ ချပေးသည်။
"I hadadentist appointment this morning and it was longer than I expected."
"I'm sorry for being late. I got stuck in every light this morning."
နောက်ကျသွားတာတောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီမနက် မီးပွိုင့်တိုင်းမိနေတယ်။
* got stuck = မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်ပိတ်မိသည်။ ရုန်းထွက်မရသည့်အခြေအနေ
မိမိသာအလုပ်မန်နေဂျာ၊ အလုပ်ရှင်ဖြစ်ပါက ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ဘာကြောင့်နောက်ကျ သည်ဆိုတာ ကို မေးချင်မှာဖြစ်သည်။ အောက်ပါဝ်ကျများလေ့လာကြည့်ပါ။
"Running late this morning?"
"What held you up this morning?"
ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျတာလဲ။ (ဘာက တားဆီးထားလို့လဲ)
"Do you haveareason for being late?"
တစ်ခါတစ်လေနောက်ကျရုံနှင့်တော့ အထက်အရာရှိကခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင် မကြာခဏဆိုသလိုနောက်ကျနေပြီဆိုပါက စိတ်တိုမည်မှာသဘာဝပင်ဖြစ်သည်။
"You have been late three times in the last two weeks. Is this going to beacontinual problem?"
ဒီနှစ်ပတ်အတွင်း နောက်ကျတာသုံးခါရှိပြီ။ ဒီပြဿသနာဆက်ဖြစ်နေဦးမှာလား။
"Your tardiness is getting out of hand. You had better start managing your morning time better."
မင်းနောက်ကျတာအကျင့်လိုဖြစ်နေပြီ။ (ထိန်းလို့သိမ်းလို့မရဖြစ်နေပြီ) မင်းရဲ့မနက်ခင်းအချိန်တွေကို စစီမံခန့်ခွဲဖို့ကောင်းမယ်။
"I expect you to be at your desk at eight o'clock. Do you haveaproblem with this?"
မင်းကို မင်းရဲ့စားပွဲမှာရှစ်နာရီထိုးတာနဲ့ရှိဖို့မျှော်လင့်တယ်။ ဘယ်လိုလဲ။(အဲဒီအတွက်ပြဿနာရှိလား)
မိမိအကြီးအကဲထံမှယခုလိုစကားမျိုးကြားရတဲ့အခါ သူ့ကိုချော့ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါမျိုးနောက်ထပ်တစ်ခါမဖြစ်အောင်ကျိုးစားမည့်အကြောင်း လေပြေထိုးရမှာပေါ့။ အောက်မှာလေ့လာကြည့်ပါဦး။
"I am terribly sorry. It won't happen again."
"I hadalot of recent changes at home, but it's all taken care of. I will not be late again."
အခုတလော အိမ်မှာအပြောင်းအလဲတွေတွေတော်တော်များနေလို့ပါ။ အခုတော့အားလုံးရှင်းပြီးသွားပါပြီ။ နောက်ထပ်နောက်မကျတော့ပါဘူး။
"I'm really sorry. It's been one of those weeks. It won't happen again."
တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒီလထဲအဆင်မပြေတာလေးတွေများနေလို့ပါ။ ထပ်မဖြစ်စေရပါဘူး။
09 448 033 6
UK နိုင်ငံရှိ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းနှင့်ဘော်ဒါကျောင်းများတွင် နွေရာသီသင်တန်းတို တက်ရောက်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းအကြောင်း ပညာရေးဟောပြောပွဲ
UK နိုင်ငံရှိ Discovery Summer, Ellesmere ကောလိပ် နှင့် St. Edmund ကောလိပ်များတွင် နွေရာသီသင်တန်းတို တက်ရောက်နိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းများဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲတစ်ရပ်ကို ဗြိတိသျှကောင်စီစာကြည့်တိုက်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့၊ တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် နံနက် ၉:၃၀ မှ နေ့လည် ၁၂:၃၀ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းနွေရာသီသင်တန်းတိုသည် အသက် ၇နှစ် မှ ၁၈နှစ်ကြား ကျောင်းသားများအတွက်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားများသည် UK နိုင်ငံတွင်ခေတ္တနေထိုင်၍ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို မိခင်ဘာသာအဖြစ် ပြောကြားသည့် UK နိုင်ငံသားဆရာများထံမှ သက်တူရွယ်တူ UK ကျောင်းသားများအပြင် အခြားနိုင်ငံများမှ လာရောက် အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူသော ကျောင်းသားများနှင့်အတူ သင်ကြားခွင့်ရပါမည်။ ၎င်းသင်တန်းတိုတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ ကျောင်းသားများကိုယ်တိုင် မသိရှိသေးသည့် ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုကို ဖော်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာမှ သက်တူရွယ်တူ သူငယ်ချင်းအသစ်များလည်း ရရှိနိုင်မည်။
ကျောင်းသားများအတွက် လေ့လာရေးခရီးစဉ်များ၊ နှစ်သက်ရာရွေးချယ်ပါဝင်နိုင်မည့် အားကစားနှင့်အနုပညာ၊ ဘာသာစကားအစရှိသည့် ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်သင်ယူခွင့်ရရှိပါမည်။ UK နိုင်ငံ၏ နွေရာသီကာလမှာ ဇူလိုင်နှင့် ဩဂုတ်လများဖြစ်ကြပြီး UK ကိုသွားရောက်လည်ပတ်နေထိုင်ရန် အကောင်းဆုံး ပွင့်လင်းရာသီချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းကာလမှာ အနည်းဆုံး ၂ ပတ်မှ အများဆုံး ၆ ပတ် အထိ ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလအချိန်ကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Mr. Brendan Wignall, Headmaster of Ellesmere College ကိုယ်တိုင် မိဘများအားရှင်းလင်းပြောကြားပါမည်။
Mrs. Jane Merrick, Managing Director, Discovery Summer
Mr. Ross Parsons, Overseas Marketing Manager, St Edmund’s College
Mr. Brendan Wignall, Headmaster, Ellesmere College
Self-Access Centre၊ ဗြိတိသျှကောင်စီစာကြည့်တိုက်၊ ၇၈ ကမ်းနားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက် - နံနက် ၉:၃၀ မှ ၁၂:၃၀ နာရီအထိ
Online မှစာရင်းပေးနိုင်သည်။ ဖုန်း ၂၅၄၆၅၈၊ ၂၅၆၂၉၀-၁ လိုင်းခွဲ ၃၄၄၃၊ ၃၃၁၁ (သို့) အီးမေးလ်လိပ်စာ education.enquiries@mm.britishcouncil.org တို့သို့လည်း ဆက်သွယ်စာရင်းပေးနိုင်သည်။
ဟောပြောပွဲအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဟောပြောမည်ဖြစ်သောလည်း မြန်မာဘာသာပြန်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ နေရာရရှိစေရန် ကြိုတင်စာရင်းပေးကြပါရန်နှိုးဆော်ပါသည်။
Permalink Reply by Hnin Chitthu on January 28, 2014 at 15:28
Permalink Reply by Thi Thi win on January 28, 2014 at 15:44
Permalink Reply by ohnmarswe on January 28, 2014 at 16:23
Permalink Reply by Cindy on January 28, 2014 at 23:06
Permalink Reply by MeMeKyaw on January 29, 2014 at 14:26
Thanks for you're sharing.
Permalink Reply by Mana on January 30, 2014 at 19:27
Permalink Reply by Nay Chi Lin on January 31, 2014 at 15:47
Permalink Reply by Soe Soe on February 23, 2014 at 13:51